Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay xubno Shabaab oo dagaal lagu soo qabtay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay xubno Shabaab oo dagaal lagu soo qabtay
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay xubno Shabaab oo dagaal lagu soo qabtay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta xukun xabsi daa’in ah ku xukuntay laba xubnood oo ka tirsanaa Ururka Al Shabaab, laguna soo qabtay Gobolka Mudug.
Bishii March ee sanadkan ayay labada eedeysane ka soo qabteen Ciidanka Xoogga Dalka deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo caan kaga ahaa Al Shabaab Maxamed Carab iyo Maxamed Xuseen Xasan Abuukar ayaa loo haystaa ka mid ahaanshiyaha maleeshiyada Al Shabaab, gaar ahaan in ay ka kala tirsanaayeen qaybaha Caafimaadka iyo Jabhadaha Gobalka Mudug.
Eedeysanayaasha oo lagu soo wareejiyay Hay’adaha Dembi Baarista ayaa gungaar ka dib ku soo wareejiyay Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida bilowgii April, xilligaasi oo ay Xeer Ilaalinta codsatay in loo gudbiyo eedeysanayaasha Xabsiga Dhexe, gar-suge ahaan.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo magaciisu afgarashadu yahay Maxamed Carab ayaa Al Shabaab kaga biiray Xudur 2016, waxaa loo diyaariyay in uu daweeyo dhaawacyada maleeshiyada, waxa uu ka shaqeeyay Ceel Cadow iyo Galhareeri oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Shabellaha Hoose.
Isaga oo u safaryo sidii uu u dabiibi lahaa dhaawacyo maleeshiyada Al Shabaab ka gaaray Bacaadweyne oo la geeyay xilligaasi Cammaara ayay wadada isku heleen Militariga Somaliya, is rasaaseyn ka dib isaga ayaa la qabtay isagoo dhaawac ah.
Maxamed Xasan Abuukar waxa uu Al Shabaab kaga biiray Bay 2018, Hiiraan ayuu tababar ku qaatay, waxaana isla xilligaasi lagu wareejiyay tuulada Caad oo Mudug ka tirsan, si uu uga mid noqday maleeshiya ku dhuumaaleysato halkaasi, oo mararka qaar weerar qarsoodi ah u tagi jiray qaybaha kale ee gobalka.
Dagaalkii ugu dambeeyay ee Bacaadweyne ka dhacay ayuu ku dhaawacmay, waxa ayna Ciidanka Xoogga Dalka ku soo wareejiyeen Hay’adaha Baarista.
April bartamaheedii ayay codsadeen Xafiiska Xeer Ilaalinta in la muddeeyo dhageysiga dacwadda, waxa ayna Maxkamadda aqbashay in loo fariista dacwadda ka dhanka ah labada eedeysane 19-kii bishii April.
Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa Maxkamadda ka codsaday labada eedeysane in loo ciqaabo dembiga ay galeen maadaama ciidamada amniga ay kala hor tageen hubka wax dila, balse ay ciidamada doorteen in la mariyo nidaamka cadaaladda.
Qareenada u dooday labada eedeysane ayaa Maxkamadda ka codsaday in loo maxariisto, maadaama aysan ka dhalan khasaaro weeraradii ay qaybta ka ahaayeen, isla-markaana ay iyaga dhaawacya ka soo gaareen.
Garsoorka Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo fadhiya kala duwan ka yeeshay kiiskan ayaa ugu dambeyn ku wada xukumay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil iyo Maxamed Xuseen Xasan Abuukar xabsi Daa’in, sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Previous articleDiidmada Cabdi Xaashi oo sii cusleysay shirka ka socda Xerada Afisyooni
Next articleXoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka oo gaaray Israel (SAWIRRO)